Abakhiqizi Bezibhodlela Zengilazi | I-China Ibhodlela Leglasi Abahlinzeki Nefektri
Ibhodlela lezimonyo Material Izinto Eziphilile Neziphephile】 - Ibhodlela lesifutho lenkungu lenziwa ngezinto ezivunyiwe, i-BPA-free, ayinawo umthofu. Okwamanje, wonke la mabhodlela ayasebenza kabusha, ungawahlanza ngemuva kokuqala kokuwasebenzisa bese uwagcina kahle. Design Idizayini Ekhombisa Ukuvuza】 - Ibhodlela elincane lepulasitiki lifakwe ikepisi nokokuvula okuvuza ngaphakathi ngaphakathi okuvikela umthwalo wakho ukuthi ungaconsi noma uchitheke. Lo mklamo uzokwenza uzizwe ukhululeke kakhudlwana phakathi nohambo. Sp Fine Mist Spray】 - Amabhodlela ethu okufafaza amukela i-nanometer ...
Amabhodlela eziphuzo ezithambile namabhodlela amakha
Ibhodlela lamafutha omnqumo
3.Olive oil bottle Ibhodlela lamafutha omnqumo Ipheka isidlo esimnandi kakhulu nesinempilo team, ukukunikeza insizakalo esezingeni eliphakeme.  Uma unemibuzo, sicela uxhumane nathi. Sizoyinakekela ngesikhathi. Supply: Sinefektri yethu, ukuze sikwazi ukuletha imikhiqizo yethu. Imboni yethu igxile emafutheni omnqumo ngokuningi t ...
Amabhodlela e-Grolsch we-Beer Brewing. Amabhodlela o-Brewing alungele Ukwenza Ubhiya, Amabhodlela eKombucha, noma Amabhodlela we-Fermentation! Lawa ma-Flip Top Bottles azokwenza i-Home Brewing ibelula! Ngamunye Seal Flip Top Glass Bottle Seal. Ubhiya wakho uzohlala uhlanzekile futhi uvikelwe ngophawu lwaleli bhodlela eliphezulu le-Swing! Ibhodlela le-Amber Glass livikela okuqukethwe emisebeni ye-UV eyingozi. Amabhodlela eBrown Glass ayathandwa ngebhodlela likabhiya noma ama-Fermenting Bottles! Amabhodlela Engilazi ane-Caps aphethe i-500 mL, noma i-16 oz, elingana no-1 Pint. Dar ...
Pheka isidlo esimnandi kakhulu nesinempilo Kugcina uwoyela wakho womnqumo uvikelekile ekuvezweni komoya-mpilo, ukukhanya nokushisa okwenziwe ngengilazi esezingeni eliphakeme Isevisi eqinile, eqinile futhi engavikinyeki: sineqembu elihle kakhulu, ukukunikeza insizakalo esezingeni eliphakeme . Uma unemibuzo, sicela uxhumane nathi. Sizokunakekela ngesikhathi. Ukuthengisela: Sinefektri yethu, ngakho-ke singakwazi ukuletha imikhiqizo yethu. Imboni yethu igxile emafutheni omnqumo iminyaka engaphezu kweyishumi, inguchwepheshe ...
Igama I-Wine Glass Bottle Capacity 250ml, 375ml, 500ml, 750 ml Uhlobo lokufaka uphawu isikulufa / i-pvc cork Ukupakisha i-pallet yokhuni, i-40HQ eyodwa: ama-pallet angama-21. iphalethi elilodwa: izingcezu eziyi-1575. noma ibhokisi lephepha MOQ izingcezu eziyi-10000 Isampula yokunikezwa yebo Ukuhlelwa kwesampula Uma sekuqinisekisiwe, amasampula azothunyelwa zingakapheli izinsuku eziyi-7. Amandla we-joker yi-750 ml, i-red red. Inengaphandle elihle, elihlanzekile elinengilazi yetshe eliyingilazi nephansi le-punk Sine-capsule enobuciko obuhle, ayikho intambo ebonakalayo, futhi yakha ubufakazi bokuphazamisa ...
Igama lomkhiqizo 250ml ubuhle ukunakekelwa komuntu ibhodlela le-PET ibhodlela le-shamphu Umbala Amandla Wenziwe ngo-250ml MOQ 10000pcs Isisindo 23g Usayizi Wentamo 24/410 Izici Imininingwane: 1. Izinto: I-PET. Izinto zangempela zihlanzekile ngokuphelele futhi zintsha sha, ezemvelo, zikulungele ngokuphelele ukupakishwa kwezimonyo, ukupakisha kwezokwelapha kanye nokudla. 2. Umbala: I-pantone yemibala noma amasampula wangempela wereferensi. 3. Ukuphrinta: Ukuphrinta kukaSilika, ukunyathela okushisayo nokuphrinta nge-offset, iphepha la ...
Ibhodlela leCosmetic 【Impilo Enempilo Neyokuphepha Okwamanje, wonke la mabhodlela ayasebenza kabusha, ungawahlanza ngemuva kokuqala kokuwasebenzisa bese uwagcina kahle. Design Idizayini Ekhombisa Ukuvuza】 - Ibhodlela elincane lepulasitiki lifakwe ikepisi nokokuvula okuvuza ngaphakathi ngaphakathi okuvikela umthwalo wakho ukuthi ungaconsi noma uchitheke. Lo mklamo uzokwenza uzizwe ukhululeke kakhudlwana phakathi nohambo. Sp Fine Mist Spray】 - Amabhodlela ethu okufafaza amukela i-nanomete ...
Ibhodlela lethu lamakha engilazi lensengetsha elibukeka kahle liyisiqukathi esifanele samakha akho ne-cologne yakho. Ungagcwalisa kalula izinhlanganisela ezihlukile zamafutha abalulekile, noma uthele amakha akho owathandayo avela emhlabeni jikelele. Kubuye kube kuhle ekwenzeni usayizi wesipho amakha noma izipho zikaKhisimusi. Amabhodlela ethu okunethezeka abamba uketshezi olulodwa lwamakha akho owathandayo. Ama-athomu wezinsimbi acwebezelayo afutha iphunga elicashile. Ikepisi le-acrylic eliqhekekile lenezela izinga lokucwengwa amanye amabhodlela, futhi alikwenzi ...